Fikambanana Aurar: milina fanadiovana ra 18 ho an’ireo hopitaly manao “dialyse” | NewsMada
Nanolotra milina fanadiovana ra ho an’ireo olona marary voa tsy maintsy manao “dialyse” ny fikambanana Aurar avy atsy Nosy La Réunion, omaly. Nandray izany ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis.
Miisa 18 ireo milina fanadiovan-dra voaray miaraka amin’ireo kojakoja sy ny akora ampiasaina mahakasika izany. Hozaraina amin’ireo hopitaly maromaro mandray olona marary voa manaraka fitsaboana. Anisan’ny hisitraka izany ny HJRA, ny CHU Befelatanana ary ny CHU Analankininina.
Maromaro ireo olona tratran’ny aretin’ny voa eto Madagasikara tsy maintsy manao “dialyse”. Tsy ny marary rehetra anefa no manana fahefana manao izany fanadiovan-dra izay mila hatao matetika izany.
Antapitrisa ny vola ilaina ho an’ny olona iray raha hanao “dialyse”. Maro ireo tsy manam-bola hanaovana izany ka miandry izay hiafarany eo. Ny sasany, mirona any amin’ny fitsaboana nentim-paharazana ho fanavotany ny ainy.
Rehefa tsy mahavita intsony ny asany ny voa, tsy maintsy miditra amin’ny fanaovana “dialyse” ny marary. Maro ny antony mahatonga ny aretin’ny voa ary tena saropady ny fitsaboana azy.